MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardData Carry+ FAQs mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
DATA » Data Carry Plus with Free Night Facebook
Data Carry Plus with Free Night Facebook
၁။ Data Carry Plus Package ဆိုတာ ဘာလဲ?
Data Carry Plus Package ဆိုတာကတော့ ည၁၁နာရီမှ မနက်၆နာရီအထိ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ကို ရက် ၃၀သက်တမ်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီးတော့ 1000GB အထိ (သို့) 400GB အထိ အပိုလက်ဆောင်ဒေတာများလည်း ရယူနိုင်မယ့် ပက်ကေချ့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူတိုင်းမှာ 1Ks/MB နဲ့ ဒေတာသုံးနိုင်ပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့် လည်းရှိပါတယ်။
၃။ Data Carry Plus Pack with Free Night Facebook ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
၄။ Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူပြီး Facebook မှ ဗွီဒီယိုအားလုံးကြည့်လို့ရမှာလား?
ကြည့်လိုရပါတယ်။ ည (၁၁)နာရီမှ မနက် (၆)နာရီအထိ Facebook မှ ဗွီဒီယိုအားလုံးကို အကန့်အသတ်မရှိ အပူပင်ကင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ Voice call, video call များနှင့် Facebook မှတစ်ဆင့် click နှိပ်ပြီးပြင်ပ Websiteများ၊ link များကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းများကို ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go Rate ဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ညသုံး Facebook အသုံးပြုခွင့်ကို ဘယ်လိုရရှိနိုင်ပါသလဲ?
၁၂၉၉ ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူတိုင်း ည ၁၁နာရီမှ မနက်၆နာရီအထိ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ကို ရက်၃၀ သက်တမ်း ဖြင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် 400 GB အထိ အပိုလက်ဆောင်ဒေတာ ကံထူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ၉၉၉ ကျပ် Data Carry Plus ပက်ကေချ့်ကို ဝယ်ယူထားပါတယ်။ သို့သော် ည၁၁နာရီမှ ၆နာရီအထိ Facebook အသုံးပြုခွင့် မရရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
၆၉၉ကျပ်၊ ၇၉၉ကျပ် နှင့် ၉၉၉ ကျပ်တန် ပက်ကေ့ချ် များဝယ်ယူပါက 1000GB အထိ အပိုဆောင်းဒေတာများ ကံထူး ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ၁၂၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus Pack များဝယ်ယူပါက အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့် (ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၆ နာရီအထိ)ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ (၆၉၉ကျပ်၊ ၇၉၉ကျပ်၊ ၉၉၉ ကျပ်တန် ပက်ကေ့ချ်မပါဝင်ပါ)
၇။ သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူပါက ဘယ်လိုခံစားခွင့်တွေရှိမှာပါလဲ?
သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus ဝယ်ယူပါက Happy Friday အပိုဆောင်း ဒေတာ (MBs) များရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ၁၂၉၉ ကျပ်နှင့်အထက် ပက်ကေ့ချ်များ သည် ည ၁၁နာရီမှ မနက်၆နာရီအထိ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook အခမဲ့အသုံးပြုခွင့် ရက် ၃၀သက်တမ်းဖြင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ကံထူးထားတဲ့ဒေတာကို ဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ?
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာ၊ ကံထူးထားသောဒေတာလက်ကျန်ပမာဏ၊ Facebook သက်တမ်း ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ Data Carry Plus Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာသက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကိုလည်း ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ည ၁၁နာရီမှ မနက်၆နာရီအထိ Facebook အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး အရှည်ဆုံး သက်တမ်းအတိုင်း ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ Data Carry Plus Pack ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
Package တစ်ခု၏ သက်တမ်းက (၃၀)ရက်ဖြစ်ပြီး ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလမှာ (၇)ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလအတွင်း Pack အသစ်ဝယ်ယူပါက ပက်ကေ့ချ်ဒေတာ ပမာဏကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာကို (၇)ရက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ည ၁၁နာရီမှ မနက်၆နာရီအထိ Facebook အသုံးပြုခွင့်ကို ဝယ်ယူထားသော ဒေတာပက်ကေချ့်သက်တမ်းအတိုင်း (၃၀)ရက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ ဝယ်ယူထားသော ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်မှ ဒေတာအားလုံးအသုံးပြုပြီးဖြစ်သော်လည်း သက်တမ်း မကုန်ဆုံးသေးပါက ည၁၁နာရီမှ မနက် ၆နာရီအထိ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook App (App (ပြင်ပ links များမပါဝင်), Messenger (Voice, Video calls များမပါဝင်) နှင့် Browser မှ Facebook အသုံးပြုခွင့်ကို ဆက်လက်ရရှိနိုင်မှာပါလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ဝယ်ယူထားသော ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်မှ ဒေတာအားလုံး အသုံးပြုပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပက်ကေချ့်၏ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးသေးပါက ည၁၁နာရီမှမနက်၆နာရီအထိ Facebookအသုံးပြုခွင့်ကို မည်သည့်ဒေတာ ကုန်ကျမှုမှမရှိဘဲ ဆက်လက် အသုံးပြုနိင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၃။ ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ အသုံးမပြုရသေးတဲ့ ဒေတာတွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲ?
၁၄။ Data Carry Plus with Free Night Facebook Pack ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပ သလား?
ရပါတယ်။Data Carry Plus with Free Night Facebook Pack များကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက *106*2# (သို့) *777# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift (သို့) 2. လက်ဆောင် ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင် ပေးနိုင် ပါတယ်။
၁၅။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။